> Resource> Atụmatụ> Best Photo ngosi mmịfe Onye kere: Olee ka a Photo ngosi mmịfe
Ò nwetụla mgbe ị iwere ọtụtụ photos maka gị na ezinụlọ gị, ndị enyi na ihe omume pụrụ iche? Otu ọchị-jupụta ụzọ na-ekere òkè ha bụ ime ka a foto ngosi mmịfe. Na-enyere aka azụ elu na-echeta na ndụ gị. Ihe bụ ihe ọzọ, o nwere ike niile na-eme ya dị nnọọ ole na ole dị mfe clicks ma ọ bụrụ na ị na-eji ngosi mmịfe onye dị ka Fantashow na DVD Slideshow Builder Deluxe. Na ma nke ndị a abụọ omume, ị nwere ike mfe ikpa foto na video n'ime ọrụ nkà na-itu n'anya onye ọ bụla. Ebe a ka anyị hụ otú ka mfe na creatively-eme ka a foto ngosi mmịfe na ọkụ na-DVD na ndị a nile na-na-otu ngosi mmịfe ngwaọrụ.
Part 1: Olee ka a foto ngosi mmịfe na Fantashow
Part 2: Olee ka a foto ngosi mmịfe na DVD ngosi mmịfe Nrụpụta
Fantashow Pụrụ inyere gị aka ngwa ngwa ka a foto ngosi mmịfe. Ọ na-enye 200+ ịtụnanya video ekwekọghị maka dị iche iche idaha. Ugbu a ibudata ma hụ otú na-eme ka a foto ngosi mmịfe na ya.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a Video Style
Banye Fantashow, na n'otu ntabi gafere 200 pụtara video ekwekọghị na n'ọbá akwụkwọ. Buru ọkacha mmasị gị ịke na pịa "itinye" na-amalite na-eme a foto ngosi mmịfe.
Nzọụkwụ 2 Import Photos ma hazie Style
Gaa na "hazie" taabụ mbubata gị photos. Ị nwere ike ozugbo ịdọrọ na dobe gị faịlụ ka ịke na e etinyere na storyboard. Mgbe ahụ, setịpụrụ oge nke photos ma ọ bụrụ na gị mkpa. I nwekwara ike iji ndị wuru na-edezi ngwaọrụ ka ubi, bugharia ma ọ bụ tinye mmetụta ka lekwasịrị faịlụ. Iji mee ka gị foto ngosi mmịfe ọzọ doro anya, swith ọzọ tan ịgbakwunye music, akụkụ Akwụkwọ Nsọ, Intro / n'aka ma ọ bụ ndị ọzọ ekwekọghị na-amasị gị.
Nzọụkwụ 3 Ekekọrịta Your Photo ngosi mmịfe Ozugbo
Mgbe ị na-mere, ịgbanwee gaa na "Export" taabụ. Ị nwere ike ịzọpụta gị ọrụ mobile ngwaọrụ ma ọ bụ kọmputa gị, ozugbo biputere video ka YouTube ma ọ bụ Facebook, ọkụ na-DVD dị ka a keepsake. Your oke!
Download na-agba ọsọ DVD ngosi mmịfe wuru, mgbe ahụ, na-eso nzọụkwụ n'okpuru ịhụ esi mee ka a foto ngosi mmịfe.
Nzọụkwụ 1 Tinye foto ma ọ bụ video faịlụ ka foto ngosi mmịfe onye
Mgbe na-agba ọsọ foto ngosi mmịfe onye, ​​ị ga-amalite site "Hazie" taabụ. Na interface, e nwere abụọ Add Files buttons ọ bụla nke ị nwere ike pịa ịgbakwunye gị foto na vidiyo. Mgbe ahụ dị nnọọ ịdọrọ na dobe foto ma ọ bụ vidiyo gaa na ndokwa ha ka na storyboard. Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie foto, pịa "Dezie" iji tinye mmetụta, akuku photos, idozi red-anya ma ọ bụ tinye caption.
NDỤMỌDỤ: Iji nwere nnukwu viewe nke niile faịlụ, pịa "Ịmụbawanye" button n'elu nri akuku nke storyboard.
Nzọụkwụ 2 Hazie ngosi mmịfe dị ka ndabere music na ikwu n'ụzọ
Mgbe importing gị faịlụ, ihe karịrị 100 mgbanwe mmetụta ga-enweghị usoro na-akpaghị aka etinyere n'etiti abụọ ọ bụla foto ma ọ bụ video. Otú ọ dị, i nwere ike ịgbanwe ha n'oge ọ bụla na "hazie" taabụ. Dị nnọọ ịdọrọ na dobe a mgbanwe site na ndepụta na thumbnail n'etiti abụọ slides. I nwekwara ike ịgbakwunye mmetụta, ngagharị ma ọ bụ Intro / Ebe E Si Nweta dị ka amasị gị.
Agbakwụnye music nwere ike dị ukwuu welie vibe nke foto gị na ngosi mmịfe. Iji mezuo nke a, pịa "Music" na storyboard. Nke a foto ngosi mmịfe onye-enyere gị aka tinye ọtụtụ dị iche iche iberibe music dị ka gị mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ tinye gị onwe gị olu, dị nnọọ pịa "Voice N'ime" ka ndekọ na mgbe ahụ tinye ya na ngosi mmịfe.
Nzọụkwụ 3 Mepụta foto ngosi mmịfe na ọkụ na-DVD
Gaa na "Mepụta" taabụ na pịa "Preview" button iji jide n'aka na foto ngosi mmịfe dị mma. Laghachi hazie taabụ ịgbanwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Mgbe ị na-enwe obi ụtọ na N'ihi ya, ịhọrọ nhọrọ na ekpe mbupụ foto ngosi mmịfe ka DVD, PC, obere ngwaọrụ, wdg I nwekwara ike ozugbo bulite ngosi mmịfe ka Youtube na zipu ozi Facebook na Twitter enyi.
Ugbu a-na na na zuru ike, ọ ga-na-ewe a mgbe na-esi gị foto ngosi mmịfe maka ekere òkè n'ebe ọ bụla.